တောင်​အဆင်းလမ်းမှာ ကားဘီးရေ​လောင်းတာ ဘာ​ကြောင့်လည်း?
ပြင်​ဦးလွင်-မန္တ​လေး အဆင်းလမ်းမှာ တွဲကားကြီး​တွေ၊ ၁၂ ဘီးကားကြီး​တွေ ဆင်းလာရာမှာ လမ်းတ​လျှောက်​ ကားဘီးကို ရေဖြန်းပြီး ဆင်းလာကြပါတယ်​။ ဘာ့​ကြောင့် ပါလည်း?
ကားတစ်စီး၏ ချာဂျင်အားသွင်းစနစ် (Charging Systems)
ခေတ်ပေါ်မော်တော်ကားတစ်စီးတွင် လျှပ်စစ်ပါဝါသုံးပစ္စည်းကိရိယာ မျိုးစုံတပ်ဆင်ထားသည်။ မော်တော်ယာဉ်လျှပ်စစ် စနစ်တွင် D.C လျှပ်စစ်စနစ်ကို အသုံးပြုထားပြီး ယာဉ်တစ်စီးလုံးတွင်လိုအပ်သော၊ လျှပ်စစ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးတာဝန်ကို Alternator ကဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ကုန်းအဆင်းတွေမှာ ဘရိတ်ပေါက်ပြီး ချောက်ထဲထိုးကျခြင်းမဖြစ်အောင်
ကားတွေ တော်တော်များများ ကုန်းအဆင်းတွေမှာ ဘရိတ်ပေါက်လို့ဆိုပြီး ချောက်တွေထဲ ထိုးကျနေတာကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ မကြာခဏ မြင်နေရပါတယ်။
Toyota Kluger ​လေးတစ်စီးအ​ကြောင်း​ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံက​တော့ဂီယာ​ဘောက်​အတွင်းမှာတက်​တက်​နဲ့မြည်​​နေပြီးဂီယာအကုန်​မချိန်းတာပါ။တစ်ခြား​ Auto Service မှာပြကြည့်​​တော့ဂီယာ​ဘောက်​လဲရမယ်ဆိုလို့အကိုတို့ဆိုင်​လာပြကြည့်တာဆိုပြီးပြောပါတယ်။
Emission Control System - Diesel Perticulate Filter (DPF system)
Diesel Engine ​တွေမှာ Emission Control System အတွက်​ Exhuast Gas Filter ​တွေကို Euro4engine ​တွေက စတင်​ပြီး အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်​ ၊ Diesel Engine ​တွေဟာ Gasoline Engine ထက်​ Emission ပိုထွက်​ပါတယ်​။
Thursday, 11 April 2019 10:11
တာယာတစ်လုံးမှ ပြောပြသော သူ၏အကြောင်း
တာယာတစ်လုံး၏ ဘေးနံရံတွင် ၎င်းတာယာ၏ အရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်ရမည့် ခွေ၏ (rim) အရွယ်အစား၊ တာယာ၏ အမြင့်ဆုံးခံနိုင်မည့် ဝန်၊ အမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်မည့် speed၊ တာယာ၏ တည်ဆောက်ပုံ နှင့် အသုံးပြုထားသော materials များ၊ တာယာ၏ ပန်းပွန်းစားခံနိုင်မှုအခြေအနေ (treadwear)၊ တာယာ၏ကုတ်အား (traction)၊ နှင့် တာယာ၏ အပူဒဏ်ပေါ်ခံနိုင်မှု (temperature resistance)၊ တာယာ၏ ထုတ်လုပ်သည့် ကာလ၊ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ၊ TWI (Tread Wear Indicator) ခေါ် တာယာ၏ ပန်းပွန်းစားမှုအခြေအနေကိုကြည့်ရမည့်နေရာ၊ စသော အချက်အလက် များကို ဖော်ပြထားသည်။